Yini engemuva kwezihlalo zamabhayisikili eTour de France? - I-Tour De France
Main > I-Tour De France > Izihlalo zebhayisikili iTour de france - unganquma kanjani
Izihlalo zebhayisikili iTour de france - unganquma kanjani
Yini engemuva kwezihlalo zamabhayisikili eTour de France?
Le 'misila yezimpungushe' isetshenziswa yibo bonke abagibeli, kuzo zonke izigaba ze-I-Tour de France. Idatha erekhodwayo isakazwa bukhoma kubahleli nakuzinkampani ze-TV, futhi isetshenziselwa ukunquma, phakathi kwezinye izibalo, ijubane eliphezulu lomnqobi wasesteji, isivinini esimaphakathi, nesikhathi ngekhilomitha.17. 2015.
Kalula nje, iTour de France ingumcimbi omkhulu wamabhayisikili wesizini, owenziwa ngokwesiko ngoJulayi. Ku-Tour, abagibeli abahamba phambili emhlabeni bancintisana ngezigaba ezingama-21 kulo lonke elaseFrance ngenani eliphakeme kakhulu lokuhamba ngebhayisikili, amasonto amathathu okugijima abawinile abahlukene nsuku zonke namajezi amaningi anemibala ehlukene okunzima ukulandela umkhondo, ngakho-ke sizoyidiliza kulo mhlahlandlela wabaqalayo we-Tour de Frost Yiluphi uhambo? ITour de France ingenye yezinkambo ezintathu zebhayisikili ezinhle futhi akunjalo? umjaho omkhulu ohlonishwayo kukhalenda ayikho imibuzo njengomnikeli i-tour de france iqukethe izigaba ezingama-21 ezisatshalaliswa ngaphezu kwamasonto amathathu manje isigaba ngasinye sinqunyelwe isikhathi, umholi womjaho kanye nomnqobi ophelele ekugcineni kunqunywa ukuthi isikhathi esiphelele sokukhululwa manje kubhekiselwa kuso ukungezelela esigabeni esiphelele njengokuhlukaniswa okujwayelekile noma i-gcas kuvame ukubizwa ngokuthi kungowokuqala ukufika entanjeni esigabeni ngasinye kuklonyeliswa owinile isiteji. Uhambo luvamise ukufaka izinsuku ezimbili zokuphumula kungekho mjaho, yize abagibeli bephuma bayokwenza ithanga ukugcina imilenze yabo ihamba, kodwa bathatha lezi zinsuku ukuze baqinisekise ukuthi abashayeli bayalulama ukuze bakwazi ukugijima kanzima ngangokunokwenzeka ekuzeni okuzayo izinsuku zokwenza umjaho ube mnandi ngangokunokwenzeka.
Lolu hambo luqale ukusukela ngo-1903 lapho kube nokuphazamiseka okuvela eMpini Yezwe I naku-II, okwenza umjaho ka-2020 u-107 uqale ezweni elingumakhelwane njengeBelgium, iNetherlands, iGreat Britain nakwezinye izindawo, manje izigaba zokuqala zomjaho zivame ukwenzeka lelo zwe, kepha bese beya eFrance ukuqala okwaziwa ngeGrand Departall, ngakho-ke izigaba zeTour de France ziwela kwesinye sezigaba ezinhlanu ezigaba zokuqala izigaba eziyizicaba lezi zigaba zivame ukuba nokuthambekela okuncane futhi zisetshenziselwa ukujaha phakathi hambisa izintaba ezinqamula emaphandleni aseFrance, manje seziwinwa ngongoti esibabiza ngokuthi ama-sprinters, abafinyelela isivinini esingaphezu kwamakhilomitha angama-70 ngehora, lapho begijimela entanjeni endaweni eshesha kakhulu, lapho-ke sinezigaba zezintaba , manje izigaba zezintaba zohambo zingumcimbi omkhulu nengxenye yomjaho, lapho wonke umuntu efuna ukuba yingxenye yababukeli nabagijimi lezi zigaba zisatshalaliswa phakathi kwezintaba zaseFrance namaphayinti futhi lezi zigaba zikhuphuka izintaba eziyizinkulungwane zamamitha ekukhuphukeni emasontweni amathathu ungagcina engqungqutheleni enkulu yezintaba njengokufika kwengqungquthela noma kwesinye isikhathi ngemuva kokwehla kwentambo ende ngemuva kokukhuphuka okukhulu lezi zigaba kuhlala kujabulisa kakhulu futhi yizinto ezinqumayo kakhulu esivivinyweni sesikhathi esijwayelekile uma ufuna ukunqoba i-tourde france kufanele ube yisikhathi esihle sokulingwa esibizwa ngokusebenza ngokungahambisani nesikhathi, ngoba ngumzamo womuntu ngamunye esigabeni sesikhathi lapho wonke umshayeli ngezikhawu ezimfushane zemizuzu eyodwa ngasikhathi , abagibeli ngokujwayelekile basebenzisa amabhayisikili akhethekile e-aerodynamic nemishini ukuhamba ngokushesha okukhulu ngejubane labo. Izilingo zesikhathi zingenzeka kunoma iyiphi indawo, kusuka kumathrekhi asezingeni eliphakeme kakhulu kuya ezindaweni ezinamagquma ngisho nokukhuphuka kwezintaba okumsulwa kunikeza ithuba elihle ekumeni jikelele ukutshala isikhathi esiningi ezimbangini. Izilingo zesikhathi seqembu zibanjwa ngefomethi efanayo neyezivivinyo zesikhathi ngasinye, kepha ziqhutshwa yithimba lonke Manje iqembu ngalinye liphuma futhi lishayele ukwakheka okuyisisekelo, ake ucabange ukuthi izinyoni zifuduka ngale ndlela enkulu ye-V, lokhu kusiza ukuphula umoya nokugcina ijubane eliphakeme kakhulu njengezisebenzi entanjeni ngokushesha okukhulu ngangokunokwenzeka.
Manje iqembu lonke liqala ndawonye futhi isikhathi sokugcina esinikezwayo kungumshayeli wesihlanu owela entanjeni, kepha imvamisa baqala ngabashayeli abayisishiyagalombili. Ngakho-ke lapho benabashayeli abayisishiyagalombili kususwe abathathu lokho kunguhlanu, ngakho-ke bavamise ukuba nabashayeli abathathu abenza okusemandleni abo. Besijwayele ukujika uCalla ashise kahle, bazojula kakhulu uma bengase bashiye umugqa wokuqeda, ukuvumela lonke iqembu liqhubeke ngaphandle kwabo, laba bagibeli bavame ukuzigingqa ngejubane labo ukunikela ngeqembu labo umholi, manje isivivinyo sesikhathi seqembu, uma senziwe kahle, sibukeka njengomshini ofuthwe uwoyela sinezinzuzo ezinkulu ngaphezu kwamanye amakilasi, ulwa nalolu hlobo lomcimbi, ophumelele ngokuphelele kwiTour de France umgibeli oyedwa onesikhathi esiphansi kakhulu ekupheleni kwesigaba sama-21, esiphele kwiChamps-Elysees eParis kusukela ngonyaka we-1975, iqembu elikhulu labagibeli lise-The tour eyaziwa ngokuthi yi-Peloton thepelotonis inamaqembu angama-22 abashayeli abayisishiyagalombili, ngamunye wabo okuholela ku-176 abashayeli ekuqaleni.
Iqembu ngalinye lakhiwa ngabagibeli abahamba phambili kakhulu abakha ukuthi ngobani abenza izinkanyezi ezihamba phambili zamabhayisikili unyaka nonyaka. Amaqembu wesigaba sesibili asezwekazini elinamakhadi asendle Amaqembu asezwenikazikazi athanda ukuba ngabagibeli abafuna ukubukwa futhi athathwa njengamancane, yize amaqembu amakhulu manje eseyithuba elihle lokuthi la maqembu, amaqembu ahambele amazwekazi, akhombise abaxhasi bawo emjahweni omkhulu kwesizini, ukuqhudelana namaqembu eBigworld Tour futhi mhlawumbe ahehe abazingeli abanethalente abazobheka ukuhlangana nabo ku-Ukuzibophezela ohambweni lomhlaba kule sizini ezayo, abashayeli abasekela amazwekazi bazophilisa umjaho ngokuhlukana ukuze banake kakhulu abaxhasi babo, ngangokunokwenzeka, manje amaqembu azovame ukugxila kumshayeli oyedwa noma ababili okuthi njengamaqembu aPhambili weqembu azohlose ukunqoba izigaba ezithile noma umuntu ozongenela ukhetho ngokwezigaba inhloso yakhe ukunqoba iTour de Franc e ukunqoba, ngokuphelele kanye nomholi weqembu lonke liqukethe imisebenzi yasendlini, okusho ukuthi izisebenzi zamakhaya manje ukusekela abaholi bamaqembu abo, ukudela ubuholi babo Izinsizakusebenza nokusiza iqembu ukufeza iToredomestiq yabo abantu bavame ukugibela eNhloko yeqembu ukubambezela ukuhlaselwa, ukunciphisa ukuhlaselwa, ukuvikela umholi emoyeni, empeleni ukugcina ngokuphelele imithombo yamandla yomholi. Abantu bendawo babuyele emuva ezimotweni zeqembu ukuyolanda ukudla, ukuthola ama-oda, ukuba namabhodlela ezimpahla zokugqoka Ukuze abaholi babo bezungeze, ngabe umqondisi wabo angaba nesibhobo eceleni komgwaqo lapho imoto yabo ingakwazi ukufinyelela kubo, ngokoqobo banikeze ibhayisikili noma ibhayisikili labo ukubabuyisela emijahweni ngokushesha njengoba isigaba ngasinye sinompetha oyedwa kuphela futhi uhambo luwinwa ngumshayeli oyedwa kuphela, lokhu kunqoba kumane kuthiwe ukusebenzisana okungenakulinganiswa kwabo bonke abalingani beqembu abayisishiyagalombili, akekho noyedwa ongawina i-tour de france iyodwa akunakwenzeka ukuthi ukusebenzisana kwe-adage kwakudala kwenza iphupho liphumelele ukuvakasha kuyindlela enhle yemibala eguquguqukayo eFrance le ngxube yamajezi asakhulayo Kusuka kumalogo abaxhasi abakhanyayo kuya emaphethini athokozisayo ngemibala egqamile munye ngempela.
Bheka ngaphansi kwawo wonke amajezi weqembu ojwayelekile ongawathola futhi uqonde izingubo zakho manje. Uzothola amajezi amane abaluleke ngokukhethekile, elilodwa kulawa amane ekugcineni kwesigaba ngasinye kubaholi Ijezi eliphuzi iLe Mayo Jean yijezi eliyinhloko nelidume kakhulu labagibeli beTour de France elinesikhathi esiphansi kunawo wonke kuthrekhi kuze kube manje, ijezi liphuzi, sibonga iphephabhuku laseFrance i-Auto, elithuthukise umjaho ekuqaleni kwekhulu lama-20, laphrintwa ephepheni elihlukile eliphuzi Manje noma ngubani ogqoka leli jezi ekupheleni kwesigaba 21 uzowina iTour de France impilo yenhlonipho kusuka kontanga yabo nakubalandeli ngokufanayo nangemali yomklomelo engama-euro ayizi-500,000 ijezi elimhlophe le-Mile Block ijezi elimhlophe lisho umshayeli osemncane ohamba phambili kulo mjaho lo nguyena oseshayweni ongcono kunabo bonke ezikhundleni ngaphansi kukaJanuwari 25th ngonyaka wokuqala womjaho ' ukugcina ijezi eliphuzi kanye nejezi elimhlophe ngasikhathi sinye kulokhu ijezi eliphuzi selibekwa eqhulwini ngakho-ke umshayeli osemusha ozoba sesibili ekumeni konke kuzoba omhlophe Gqoka ijezi ijezi ekupheleni kohambo umshayeli osemncane ohamba phambili ugoduka nama-euro ayizinkulungwane ezingama-20 000 Ijezi eliluhlaza elibizwa ngeLumaio ver yijezi lomgijimi kulo lonke umjaho Amaphuzu anikezwa umshayeli wokuqala owela entanjeni Usuku ngalunye amaphuzu akhona ayanikezwa, kodwa ayahluka amaphuzu atholakala ngokuya ngesigaba sosuku ngaphezu kwalawa maphuzu umzila wansuku zonke ugcwele okubizwa ngokuthi yi-intermediate sprints eza ngaphambi komugqa wokugcina, izinhlanga zihlala zijabulisa. Amaphoyinti okuqalisa wokuqeda anikezwa amaphuzu Kokubili kuma-sprints aphakathi nendawo kanye ne-sprint yokuqeda futhi umshayeli onamaphuzu amaningi ekupheleni komjaho manje ugqoka ijezi eliluhlaza leli jezi livame ukunqotshwa noma ukugqokwa ngumgijimi oqoqa amaphuzu lapho unqoba izigaba futhi uvame ukuphela kwabangu-15 abaphezulu ngezigaba anganqobi futhi ezintabeni eziphakeme alwele ama-outliers t ungavikela ama-sprints aphakathi nendawo ngisho nasezinsukwini lapho bengenalo ithuba lokunqoba Intengo yejezi eliluhlaza ingamashumi amabili nanhlanu ama-euro ayizinkulungwane, ijezi elinamachashazi i-la moi poirous, ngendlela efanayo kubangani bezinyathelo eziphakathi phezulu endaweni ngayinye yokukhuphuka ebalulekile yabagibeli bokuqala ukufika phezulu, inani lamaphoyinti atholakalayo liyahluka ngokuya ngokuhlelwa kwe ukwenyuka kuba nzima kakhulu umgibeli we-Ans The onamaphuzu amaningi asezintabeni ugqoka ijezi elinamachashazi futhi uthatha ama-euro ayizi-25,000 abuyele nawo ekhaya ekupheleni kohambo.
Masikhulume ngama-sprinters Ama-Sprinters ajwayele ukuwina izigaba ezi-flat ukuzivikela emoyeni ngemuva kwabalingani beqembu lonke usuku lonke ukuzama ukuhlala eduze nendawo ephezulu ukugwema inkathazo ngokugwema ukwahlukana ngezigaba zobuchwepheshe ukugwema ukushintsha kwenkambo ukushayisana komoya zonke izinhlobo zezinto Sprinters ngokoqobo kepha uma bezisola ngazo ungalokothi uthinte umoya futhi bahlala becathama ngaphambili kwe-peloton kuze kufike kumamitha ayikhulu okugcina, lapho beqhamuka khona ngemuva kozakwabo ababanikeze ukuhola okukhulu ukuphula ukunqoba ukuze bagijimele emgomweni Ekusebenzeni okuphelele ngokuphelele , ama-sprinters angakhiqiza amandla amaningi noma isikhathi esifushane futhi ashesha kakhulu. Ukuba ngumgijimi kuwumsebenzi owehluke kakhulu futhi oyingozi incazelo efanayo ekugcineni kohambo lomjaho wezokuvakasha we-tendenzie ll amahora ngemuva kwabawinile kukho konke ukuma, yize kungenzeka ukuthi uzuze izigaba eziningana ezigabeni zezintaba zokuvakasha unqotshwa ngochwepheshe bokukhuphuka abamsulwa laba bagibeli benza imisebenzi yokugibela futhi benza abagibeli abasheshayo bavame ukuba ngabagibeli abahlose ukuwina uhambo jikelele Kodwa umjaho futhi unabagibeli abangenantshisekelo ngejezi eliphuzi. Banenhloso emsulwa yokuwina abafika engqungqutheleni nezigaba zezintaba.
Manje umgibeli ofuna ukuwina lo hambo wonkana kufanele akwazi ukukhuphuka izintaba kahle kakhulu, futhi namandla okumele akhe izikhala ezinkulu kuligi futhi enze izimbangi zabo zilahlekelwe yisikhathi esiningi ekumeni konke ku esisodwa swoop Isivivinyo sesikhathi somuntu ngamunye sibaluleke kakhulu emijahweni yasesiteji imvamisa kuzoba khona okungenani kanye kuhlelo ngalunye lwe-tour de france, kepha abanye bangezelwa umholi weqembu ababili noma ngaphezulu abathathu noma ngaphezulu abaphumelele izinga lonke kuhambo g abafisa win kumele akwazi ukukhiqiza isivivinyo sesikhathi esihle isivivinyo sesikhathi ngokuvamile sihlala noma kuphi kusuka kumaminithi angama-30 kuya ehoreni, futhi abashayeli banethuba lokuwina imizuzu ngaphambi kwezimbangi zabo uma bekwazi kahle ukuba yimbangi yonke Ukunqoba ngamakhono Isivivinyo sesikhathi sizoba nenzuzo enkulu kunembangi ye-Agc ethembele kuphela ekukhuphukeni okusheshayo ezintabeni ukuthola isikhathi manje ngaphezu kwesivivinyo sesikhathi sokunikeza amabhonasi esikhathi sansuku zonke kubagibeli abathathu bokuqala ngaphezulu kweThe finish li I-Grand Tour ithatha amasekhondi ayisithupha noma amane endaweni yokuqala, yesibili neyesithathu yeWomen Tour de France Eseduze kakhulu ne-peloton yabesifazane I-Grand Tour yamasonto amathathu yenzeka eGirorosa, umjaho wezinsuku eziyishumi ojwayele ukuqala ngoJulayi kanye nenkampani ehlelayo indawo yokuvakasha futhi inkambo yomjaho wosuku olulodwa yowesifazane selokhu yabanjwa emzileni ofanayo nesigaba somjaho wamadoda iminyaka eminingana. Lokhu bekuyinkambo eyisicaba ezungeze ama-champs-elysees eParis obevame ukunqunywa yiqembu elikhulu labasubathi ubuso bebhayisikili labesifazane kuze kube phakade futhi kungaba yisinyathelo esikhulu maqondana nomdlalo olingana ngempela futhi ngokwami ​​ngiyazi ukuthi kungaba yinto emangalisayo ukwazi ukubona lokhu futhi uphile kahle nginephutha ngibona kanjani le ndawo esiyithandayo ukubona izivakashi emjahweni we-gcn zidlula kunjalo kodwa mhlawumbe siyabandlulula kancane kepha ngaphandle kohambo sinokunye okuningi okuhle izinhlanga unyaka wonke, kepha i-gcn yintsha? IRace Pass inakho konke ongakufuna, inazo zonke izinhlobo zezici ezinjengamaphrofayli esiteji, uhlu lokuqala, okuvelele nsuku zonke ngemuva kokuhlaziywa komjaho nezinye izinto eziningi ezinhle, inakho konke okudingayo, noma ngabe ungumbukeli onolwazi noma umjaho webhayisekili oshiseka ngokweqile okokuqala ngakhoke yi-tour de francethe enkulu ekhombisa umcimbi omkhulu ngokoqobo umcimbi omkhulu wonyaka emhlabeni wamabhayisikili ukuvakasha kuyisiqalo esihle uma ungakaze ubone imijaho yebhayisikili ngaphambili uma uthanda le ndatshana, siphe umoya futhi uma wazi othile okumanje uhamba ngebhayisikili futhi angahle afune ukwazi ngemijaho yamabhayisikili nohambo. Bathumelele le ndatshana ukuze ubathokozise, ​​ngiyabonga ngokubuka futhi sizokubona ngokuzayo
Hlobo luni lwamabhayisikili abagibeli beTour de France abawasebenzisayo?
Njengamaqembu amaningi ku-Ukuvakasha, EkaLotto-Soudalabagibeliunemigwaqo emibili eyehlukeneamabhayisikilionawo. Kuya ngesiteji kanye / nomaumgibeliizintandokazi, bangahlesebenzisaUkugibela kweRidley's Helium SLXibhayisikilinoma i-Noah Fast aeroibhayisikiliesetshenziswa nguCaleb Ewan.
Kumahhala futhi kuyasiza ekusekeleni isiteshi. Ngakwesokudla, ake siqale. (I-Dramatic Music) Asikwazanga ukwenza uhlu lwamabhayisikili olushisa kakhulu ohambweni lwalo nyaka ngaphandle kwalokhu, iCannondale SuperSix EVO entsha sha, uhlobo olusha oluthuthukisiwe lwe-aero ye-EVO edlule.
Futhi lokhu kuphethwe nguRigoberto Uran wethimba le-EF Education First. Futhi kungokokuqala ngqa ukubona leli bhayisikili kule mibala ekhethekile. Ngakho-ke inemibala ye-EF kuyo futhi ngaleyo ndlela uhlobo lokuqedwa kokunsomi okufiphele okuncane okubomvana kulo, okuluhlobo oluhle.
Futhi kuhamba kahle impela ngezindonga eziseceleni ezinsundu. Manje, ngokuthakazelisayo, leli bhayisikili liyatholakala Lingasiza ithimba le-EF kuwo womabili amarimu naku-disc. Futhi mhlawumbe ngokuthakazelisa ngokwengeziwe, kube nokuxabana okuncane phakathi kwabashayeli.
Banikezwe bobabili, abanye babashayeli, uhhafu weqembu, ngicabanga ukuthi abane babo bebevulelekile ukuvula inguqulo yama-disc brake kanti enye ingxenye yeqembu ithe, 'Cha, ngifuna inguqulo yebhuleki.' Kunoma ikuphi, okuthakazelisa kakhulu njengoba omakhenikha becabanga ukuthi bangawathola womabili amabhayisikili aze afike kumkhawulo wesisindo we-UCI ongu-6.8kg, ivele ifike ngaphezu kuka-6.9kg engisola ukuthi yenzelwe inhloso, yilelo Cala elilodwa ukuthi ibhalansi ye-UCI icishiwe.
Kepha ibhayisikili elishisa kakhulu impela. I-Aero nokukhanya? Awukwazi ukugibela amabhayisikili apholile kunazo zonke eTour de France futhi wazi ukuthi kunenye kaPeter Sagan okukuyo. Le yiSpecialised S-Works Venge azoyisebenzisa ezingeni elincomekayo leTour de France, yize kunjalo efinyelela isisindo esilula kanjalo netiyela.
Manje uSagan uzoqala umgwaqo wokuqala okokuqala ngezigaba zeTour de France ngezingubo ezijwayelekile zeBoro Hansgrohe, kepha lapha ngamabhande wothingo azungeze imikhono. Futhi kungenxa yokuthi akasengumpetha womhlaba futhi akasengumpetha kazwelonke. Kepha lokho akusho ukuthi akenzi umkhuba wokuhamba ngebhayisikili, kunjalo.
Asisekho isicwebezelisi esiluhlaza kusuka ngonyaka odlule uJon Cannings okukhombise ku-athikili yebhayisikili eyi-pro, ku-glitter ecashile kancane ngaphezulu kwempunga okufiphela kwimpunga ye-matte oyibona ngaphezulu bese uza lapha Nanti igama lakhe phezulu tube, lapho ama-initials akhe ngaphambili kweshubhu ephezulu. Futhi lapha ngaphakathi ngaphakathi kwe-chainstay unohlu lwakhe lokunqoba kobuqhawe bomhlaba - kathathu impela okwamanje anqobe eminyakeni elandelanayo. Owokuqala wawuseRichmond ngo-2015, kwase kuba eDoha ngo-2016 wagcina eseBergen ngo-2017.
Kazi olandelayo uzoba nini. Mhlawumbe akukude kakhulu. (umculo omnandi) - Omunye wamabhayisikili ashisa kakhulu kimi eTouris yalo nyaka nakanjani i-CustomCanyon Ultimate CF SLX ka-Aleja ndro Valverde.
Futhi kuyisiko ngoba kudwetshiwe ukubungaza ukunqoba kwakhe kuma-UCI World Road Race Championship e-Innsbruck. Ungumpetha wamanje wamanje futhi sinamaribhoni wothingo kuhlaka nalolu golide oluhle kakhulu kushubhu ephezulu lapha, kukhona amathani ezinye izinto ezithambile zothingo ngakho emasondweni unemininingwane yothingo, ngisho nasesihlalweni sakhe seFizik Antares esinothingo oluncane Amaribhoni Kepha engikuthanda kakhulu yitape ephezulu yetape kuthebhu yesibambo seZikhumba Zesizungu. Kuhle lokho, kubukeka kukuhle.
UValverde ubuye asebenzise i-Canyon cockpit efanayo ene-120 stem kanye nama-handlebars ayisentimitha ayi-41 njengami. Ngisho, empeleni nginguValverde, akunjalo? (umculo omnandi) - Ngicishe ngibe nesiqiniseko sokuthi lokhu kuzoba okulula kunawo wonke emabhayisikili esiwafaka kule ndatshana ethile, njengoba okwamanje isisindo saso singama-6.66 kilograms, esingaphansi kakhulu kwesilinganiso esiphansi sesisindo se-UCI.
YiPinarello Dogma F12 X-Light entsha sha, engekaColombi umuzwa wokuqwala u-Egan Bernal weqembu le-INEOS. UPinarello ukwazile ukwehlisa isisindo saleli freyimu ngo-60 amagremu kusuka ku-F12 ejwayelekile futhi lokho kungenxa yokuthi basebenzise indwangu yekhabhoni engu-T1100G 1K yokundiza nalena njengebhayisikili elihamba phambili endatshaneni ezayo. Ngokuthokozisayo, umakhenikha omkhulu weThimba INEOS uGary Blem uthe ngeke balayishe leli bhayisikili ngokuzenzela ukuze lehle liye kulowo ubuncane bama-kilogram ayi-6.8, mane nje ushintshe izinto ezimbalwa kuze kufike isikhathi, mhlawumbe lezo ziyizindlu zebhodlela kancane esindayo noma nezikulufo kusigaxa sesihlalo lapha.
Kwakuthakazelisa nokuthi bakala ama-6.85 kilograms. Kunesizathu esizwakalayo salokho, ukhathazekile ngokungafani phakathi kwezikali zakho nalezo i-UCI ezizozisebenzisa ukukala ibhayisikili ngaphambi kokuqala komjaho. (umculo omnandi) - Le yiColnago V2-r evela kuDan Martin ovela e-UAE Team Emir ates.
Well lena ibhayisikili elikhohlisayo elishisayo. Ngithi ngishisa ngobuqili ngoba le V2-r ayifani nenye. Yebo, kufana nomunye.
Kungama-gramu angama-200 alula kunerimu ejwayelekile ye-V2, nguFabio Aru noDan Martin kuphela abanale nguqulo ekhanya kakhulu. Ngenxa yalokho, imishini yeqembu yayinesisindo esingamakhilogremu angu-6.8.
Kodwa-ke, okwamanje ayikho kumodi engu-6.8 kg, njengoba inamasondo aqinile futhi anamasondo angenasifo futhi uDan uzowagibela ezigabeni ezincomekayo ngoba zinamandla amakhulu futhi amasondo anokumelana okuphansi kokugingqika. Kepha uma eshayela ezintabeni, amathayi we-tubular ayahamba futhi aqonde ngqo kumkhawulo we-6.8 UCI.
Kumnandi. (umculo oshubile) Ibhayisikili elishisayo kakhulu, lona ngumholi weqembu elisha likaScott Addict RCof kaMitchelton-Scott, u-Adam Yates, futhi ngithi ngisha sha ngoba kahle, lisha sha, uliphethe ngesandla sakhe njengamanje futhi alikho empeleni iqhutshwa noma iqhutshwa. Futhi iScott Addict entsha sha ingushintsho olungcono futhi.
Ukubuyekezwa kwe-wahoo kickr
Njengamabhayisikili amaningi akhuphukayo esiwabonayo, itholakale i-aerodynamic. Ngakho-ke sinokuhlala kwesihlalo esehlisiwe, okuthunyelwe okwenziwe ngo-D, amaphrofayli we-aero tube. Futhi lokhu kubukeka kahle njenge-aero cockpit.
Futhi zonke izintambo zihlanganiswe ngokuphelele lapha, ungasho nje ukuthi 'Izintambo azibonakali nakancane. Ngakho-ke ucabanga ukuthi umoya uwenza ushelele kakhulu. Futhi kumanje i-disc brake ihambile.
Esandulele sasiyirimu nediski, kepha manje amabhuleki ediski kuphela. Noma kunjalo, ngicabanga ukuthi kumangalisa ngokuphelele. Okwamanje iwuhlobo lwemodi yesiteji esicabalele, sinamasondo ajulile angama-60 nekhasethi lamagiya elincane elingu-11-25.
Kepha ungalindela ukuthi u-Adam angakushintshanisa lokho ngamasondo athophayo nekhasethi elikhulu uma efika ezintabeni, ngikujabulele lokhu kubukeka futhi ngijabulele amanye amabhayisikili asebenza kakhulu lapha ohambweni. Futhi uma ufuna ukubhekisisa noma imaphi amabhayisikili akulesi sihloko-ke sinezindatshana ezigcwele zebhayisikili ezingatholakala manje noma zizoba khona maduze, futhi uma uthola enye yalezo ezesabekayo ze-GCN Alpe d'Huez t -ihembe lokufuna ukuthintwa, qedela ngeDutch Corner lapho, kuhlole, bese uba senhlanhleni. Ayatholakala esitolo se-GCN.
Ungachofoza lapha ngezansi. Hambani manje. Usale kahle!
Yiziphi izihlalo ezisetshenziswa izinzuzo?
ISelle Italia imelwe kahle ku-ngobai-peloton. Umgibeli waseBrithani weTeam Dimension Data uSteve Cummings usebenzisa iNovus Boost Kit Carbonio Superflow enezinsimbi zekhabhoni / ze-ceramic kanye ne-double density padding. Funda iSelle Italia Novus Boost Superflow yethuisihlaloukubuyekeza.ishumi nanhlanu. 2019.
Ngakho-ke kuyimakethe yokuncintisana yabaxhasi nemikhiqizo ePalatal Ngakho-ke ake sibheke amaqembu ayi-18 e-UCI World Tour bese sibona ukuthi yiziphi izinto ezibalulekile abazisebenzisayo ngesizini ka-2018. Bheka ukuthi ubani osebenzisa iziphi izigaxa namagiya futhi sizokulethela izibalo. Ngakho-ke uShimano emabhayisikili ala maqembu alandelayo: AG2R LA MONDIALE, ASTANA PRO TEAM, BAHRAIN MERIDA, BMC RACING TEAM, BORA HANSGROHETEAM DIMENSION DATA, TEAM EF EDUCATION FIRST, FDJ, TEAM LOTTO NL-JUMBO, MITCHELTON-STOT, STEP IZIPHAKAMISO, IQEMBU LAMAQEMBU, ITIMU ISUNWEB GIANT FUTHI LENZE ISEGAFREDO okungenani lenze izigaxa namagiya.
Lokho ngamaqembu ayi-14 kwayi-18. Ukhetho lwesibili oludume kakhulu ngo-gearbox yiCampagnolo ne-super record EPS levers and gear. Amaqembu asebenzisa lokhu ngo-2018 yiLOTTO-SOUDAL, MOVISTAR TEAM ne-UAE TEAM EMIRATES kusele iqembu elilodwa kuphela.
Ungakwazi? ucabanga ukuthi Kulungile, kulungile, ngizokunikeza uma ungakwazi. Yiqembu leKATUSHA-ALPECIN. Basebenzisa ama-lever namagiya weSram Red eTap.
Okulandelayo: izihlalo, empeleni kuyisinqumo esibaluleke kakhulu kumgibeli okhokhelwayo oshayela amashumi ezinkulungwane zamakhilomitha ngonyaka. Ukukhetha okungalungile kungonakalisa isizini. Ngakho-ke ake sibheke ukuthi ngubani osebenzisa ini.
Ngakho-ke, fi'zi: k, unamaqembu amahlanu asebenzisa izikhwama zakho zango-2018. Leyo yi-MOVISTAR TEAM, TEAM SKY, TEAM LOTTO NL-JUMBO, AG2R LA MONDIALE KANYE NOKUGCINA IBMC RACING TEAM. Prologo, nawe unamaqembu ama-5.
Fi'zi efanelekayo; k. Lokho yi-FDJ, TEAM EF EDUCATION FIRST, BAHRAIN MERIDA, ASTANA NE-UAE TEAM EMIRATES. I-Specialised ne-Selle Italia Banamaqembu amabili asebenzisa isihlalo sawo.
Okokuqala kwabakhethekile yi-BORA-HANSGROHEUND FUTHI ISITEBhisi SOKUSHESHA. Futhi kwaSelle Italia sineLOTTO-SOUDALand TEAM KATUSHA -ALPECIN. Imikhiqizo elandelayo imelwe kuphela eqenjini elilodwa.
Futhi yiBontrager kuTREK SEGAFREDO. SineGiant kuTeam SUBWEB GIANT. Ama-saddles ama-Smart enziwa yiThimba le-DIMENSION DATA.
Ekugcineni, MITCHELTON-SCOTT, usesikhwameni seSyncros. Ekugcineni, ake sibheke amamitha kagesi. Yebo, zingatholakala cishe kuwo wonke amabhayisikili awodwa.
Abayisebenzisi, kepha ngobukhulu bakhona lapho nangaphakathi. Ake sikubheke lokho ngoba le makethe isishintshe kancane kule minyaka embalwa edlule, futhi isikhathi eside bekungamamitha kagesi kuphela esiwabona emabhayisikili esewonke. Kodwa izinto sezishintshile.
Izinhlobo ezintsha sezifikile emakethe. Kunezikwele ezine zango-2018. Ngakho-ke i-AG2R LA MONDIALE, i-BAHRAIN MERIDA, iLOTTO -SOUDAL NE-TEAM EF EDUCATION KUQALA.
UShimano wethule imitha yamandla ka-R9100P emuva ngo-2017. Futhi sebethathe iningi lamamitha kagesi ngonyaka ka-2018. La maqembu alandelayo awasebenzisela u-2018: BMC RACING, FDJ, TREK SEGAFREDO, TEAM SUNWEB GIANT FINALLY MITCHELTON-SCOTT kulo nyaka. sikumabhayisikili amathathu ohambo lomhlaba.
Lawa yi-VAE TEAM EMIRATES, i-ASTANA PRO TEAM futhi ekugcineni yi-MOVISTAR TEAM. Manje sekukhethekile. Kubonakala sengathi baxhasa amaqembu ambalwa nakulo nyaka, futhi lelo yiqembu abalinikeza amabhayisikili.
Ngakho-ke amaqembu avela eBORA-HANSGROHE naku-QUICK-STEP FLOORS. Asazi kangako ngale mitha yamandla. Futhi izinkampani uma uthi nhlá, kepha kuphela ngelebuli yomkhiqizo ekhethekile kuyo.
Kepha sizoba nemininingwane yokuthi singathola kanjani. Iqembu lowake waba ngumpetha womhlaba uMark Cavendish, kunjalo ITIMA DIMENSION DATA. Nguwe wedwa iqembu iRotors 2IN. isebenzisa amamitha kagesi.
Manje njengephayona, hlala emabhayisikili we-TEAM LOTTO NL-JUMBO ka-2018. Njengezigaba zebhayisikili leTeam SKY. Ekugcineni uQuarq, bangabahlinzeki beqembu leKATUSHA-ALPECIN lokunikeza impendulo kubo bobabili abagibeli nabaqeqeshi, manje ngithemba ukuthi ukujabulele lokhu kuhlola okuncane, ngicubungule amabhayisikili aphambili ukuze ngibone ukuthi kufanele ngenzeni ukusebenzisa u-2018 .
Ngazise imikhiqizo yakho oyithandayo yale mikhiqizo kumazwana angezansi. Ngifuna ukuzifunda lezi futhi ngixhumane nazo. Manje ekugcineni khohlwa ukuthanda nokwabelana ngale ndatshana nabangani bakho kanye ne-TCN Tech nayo ubhalise esiteshini.
Manje chofoza ilogo esibukweni. Kufanele ukwenze lokho. Ngezindatshana ezimbili ezinhle kakhulu, kuthiwani ngobuchwepheshe obuthile esibutholile lapha.
Futhi ngezansi lapha, bheka ibhayisikili likaPeter Sagan.
Kuyini kwiTour de France Musette?
Ukudla okusemabhayisikili eI-Tour de France
Ngokubanzi, ai-musettekuthathwa njengesikhwama esincane esisetshenziselwa ukuthwala ukudla noma okomuntu siqu ngenkathi uhamba izintaba, uhamba, uhamba ngebhayisikili njll. Emhlabeni womjaho wamabhayisikili osezingeni eliphakeme, lesi sikhwama siqukethe ukudla namanzi futhi sinikezwa abagibeli bamabhayisikili endaweni yokuphakelayo ngesikhathi somjaho.
Uma usuyibonile iTour de France manje, kungenzeka ukuthi uke wabona abagibeli bethatha izikhwama ezinjengalezi kubantu ababemi eceleni komgwaqo cishe maphakathi nesigaba ngasinye. Babizwa ngama-musette futhi basuthi. Isizathu salokhu ukuthi abagibeli akudingeki baqale isigaba sosuku ngalunye ngezikhwama ezinamafutha ezigcwele konke ukudla abakudingayo kosuku.
Empeleni, aqukethe isidlo sasemini sabashayeli. Kulesi sihloko, sibheka ngqo okukuyi-musette ejwayelekile, sichaze ukuthi kungani ikhona, futhi sikubonise ukuthi ungazenza kanjani ezinye zezinto ezikhethekile izinzuzo ezizidlayo njengamaqebelengwane erayisi. Qiniseka ukuthi ubhalisela i-GCN uma ungakashayi futhi bese ushaya isithonjana sensimbi encane njengoba uzothola isaziso lapho silayisha i-athikili futhi, kumahhala futhi kusiza nesiteshi Nayi i-musette yethu ye-GCN, ngizoyibeka konke okukuwo.
Ukuqala ngento enkulu kunazo zonke, amabhodlela. (umculo we-elekthronikhi okhululekile) T Uvamise ukuthola amabhodlela amabili kwi-musette, noma i-bidon njengoba abizwa kanjalo uma ungumFulentshi. Futhi lokho kusho ukuthi lapho abagibeli bethatha i-musette yabo, balahla amabhodlela asebhayisikili labo, okusho ukuthi uma ufuna ibhodlela lamanzi njengesikhumbuzo, indawo enhle yokuhlala ngaphakathi noma ngaphandle ngemuva indawo yokudla emjahweni ophambili.
Kunezinto eziningi ezahlukahlukene ongazifaka emabhodleleni futhi lezi zizokwenzelwa umgibeli ngamunye, kuya ngokuthanda komuntu kanye nezidingo zesiteji. Ungaba namanzi amadala nje lapho. Futhi abagibeli abaningi bayakwenza, kepha ungasebenzisa futhi izimpushana zamandla ezinjengalezi ezivela kubangani bethu baseCanal, i-Enervit, zingena kungaba yizikhwama noma amathini, futhi zikuvumela ukuthi uphinde uvuselele ngawo wonke amaminerali abalulekile, kodwa futhi nalawo mafutha nokuthatha ama-carbs esiteji.
Okunye esikubonile njengenkambiso encane esiyiqaphele eGiro, abanye abagibeli empeleni banamaprotheni ebhodleleni labo. Futhi lokhu kuvame ukuba sesiteji esicaba lapho umuntu ofuna umncintiswano weGrand Tour, lokhu kufana nosuku lokuphumula kubo ngakho-ke bazoba namaprotheni amancane kwelinye lamabhodlela abo ngesikhathi esithile esiteji nje ukubasiza ngale nqubo yokutakula. Ngokwami, ngithanda ukuba namanzi kwelinye lamabhodlela ami bese ngithola impuphu yamandla kwenye.
Yilokho enginakho futhi bazoya kumusette. Okulandelayo kuza imigoqo yamandla. Into enhle ngemigoqo yamandla ukuthi aphakeme kakhulu kuma-carbohydrate ngevolumu encane, okusho ukuthi awathathi isikhala esiningi ephaketheni lakho.
Manje ziza zonke izinhlobo zokunambitheka nezinhlobonhlobo, futhi kulezi zinsuku zigcwele ama-carbohydrate atholakala kalula ongafuna. Kepha umkhuba omusha esiwuqaphele nabagibeli abangochwepheshe ukuthi siya ngokuya kulabo abanamaprotheni. Lokhu manje kunenzuzo eyengeziwe yokusiza abagibeli ukuthi balulame futhi bazivumelanise nokuqeqeshwa njengoba bekwenza.
Ngokuhamba kweviki ezintathu iGrand Tour efana neTour de France, izinto ezincane njengokululama okungcono zingenza umehluko ngizobeka ezimbalwa zalezi ephaketheni lami, ngizosonga elinye lamaprotheni lapho. Futhi-ke okunye kwalokhu kunambitheka kokhilimu kalamula. Intandokazi yami.
Okulandelayo ngama-gel. Hhayi-ke, ama-gel cishe yiyona eyaziwa kakhulu futhi enomusa, yebo, impendulo ephezulu yeFamily Fortunes yalokho okudlulwa abagibeli bamabhayisikili ngebhayisikili, izinhlobo ezahlukahlukene nokunambitheka, kepha uma ungajwayelene nabo, empeleni kunoshukela onoshukela kakhulu, onoshukela uketshezi oliphuza ngokushesha, lungene ohlelweni lwakho bese lubuyisela kabusha ngokushesha futhi ungene egazini ukukunikeza leyo glucose, i-fructose ne-sucrose namanye ama-molecule kashukela aqukethe ukukugcina unamandla. Manje kunezinhlobo eziningi zama-gel, kukhona ama-isotonic gel ukukusiza ukuthi uhlale unamanzi ezinsukwini ezishisayo impela, futhi kukhona nama-caffeine gels angama-gel ane-caffeine.
Futhi izinzuzo zithanda ukubathatha ukubanikeza umfutho omncane, imvamisa ngasekupheleni kwesiteji. Futhi ama-gel ngokuvamile ayinto abayithatha ngemuva komjaho noma isiteji, bavame ukuqala ngokudla kwangempela okuqinile ngakho-ke amabha nezinye izingxenye esiza kuzo. Futhi-ke, uma ufuna ngempela lokho kukhushulwa okusheshayo ekugcineni, ama-gel.
Ngizofaka leyo flavour ye-caffeine kimi ukuphela komlenze wanamuhla. Yini esinayo lapha? ? Ukunambitheka kwe-Cola nokunambitheka kwe-orange. Ngiyindoda yekhola, ngithatha ijeli le-kola.
Okulandelayo into ongayilindela. Kepha kuyinto esiyibona kakhulu kuma-pro-musettes. Futhi leyo ikani lesiphuzo se-carbonated.
Yebo, ngingumuntu ojwayelekile, lokhu akuyona ikani elijwayelekile. Bengifuna ukukuqonda ngqo lokhu uma kwenzeka ucabanga ukuthi ngiyisidlakela noma okuthile. Kuyinto encane engu-150-milliliter esikhundleni se-330-milliliter ejwayelekile.
Yize ubungeke usibone leso siphuzo ngoba ngivele ngikuthathe etafuleni likaLloydie futhi kungubhiya, ngikubeke laphaya i-cola Futhi lokho kungenxa yokuthi isiphuzo esibandayo esinoshukela futhi abashayeli, kahle-ke, uma bethanda ukunambitheka, kuhle ngokuziphatha. Kepha ngeke ubone usayizi ogcwele futhi isizathu kungenxa yokuthi iyaphusha futhi amabhamuza negesi, kungaba yigesi encane, isikhunta esincane ongasifuni uma ugibela ibhayisikili. Kepha sizokufaka kumculo.
Kuma-musette amaningi ungathola ama-sandwich amancane kwezemidlalo abizwa ngama-paninis, abhekisa e-Italy. Futhi zivame ukuhlanganiswa ngaleyo ndlela. Hhayi-ke, lokho okuyikho ngokuvamile kunoshukela omncane omnandi, kahle, amnandi njengalena, awekho ama-crust, bese egcwaliswa ngokugcwaliswa okuhlukile, yisikhathi sasemini phela.
Ungitshela ukuthi ukugcwaliswa okuthandwa kakhulu nguDan Lloyd kwakuyibhotela lamantongomane namabhithi kabhanana, ngakho-ke sakwenza lokho. Kepha ukusakazwa kashokoleti kuvamile lapho uzizwa unamanyala. Kepha futhi izinto ezi-heartier, kahle, i-tuna, i-ham, ushizi, noma yini, konke kungenzeka.
Noma ngabe yini abashayeli abayithandayo, nalokhu nakwiMusette. Futhi ngenkathi ama-carbohydrate esamishi elincane engangeni kalula njengakwimpuphu ekhethekile yamandla, kumnandi ukuba nokuthile okunamandla nokuthile okuqinile naphakathi kwakho konke ukudla okumuncwa kalula futhi kungcono kakhulu ohlelweni lokugaya ukudla. Ikakhulukazi emasontweni amathathu.
Ikhekhe elilandelayo lelayisi, enginakho lapha. Futhi amakhekhe erayisi abe intandokazi eqinile phakathi kwabagibeli ku-peloton pro. Futhi ngesizathu esizwakalayo, irayisi liwumthombo omkhulu wama-carbohydrate, limunca kalula, futhi alinankinga kakhulu ohlelweni lokugaya ukudla namathumbu abantu abaningi.
Futhi inensalela ephansi, okusho ukuthi ayishiyi i-fiber eningi emathunjini ngenani lamandla eliqukethe. Ngakho-ke awuthwele isisindo esiningi sale fiber, obekungeke kwenze lutho olubalulekile emdlalweni ofana nokuhamba ngebhayisikili, lapho amandla esisindo ebaluleke kakhulu. Ngizofaka amakhekhe erayisi ngaphakathi, kodwa ngaphambi kokuba ngikwenze lokho, ake siye ekhishini ngizokukhombisa kahle ukuthi ungenza kanjani futhi ugoqe owakho amakhekhe erayisi. (umculo we-elekthronikhi okhululekile) Ama-gel nemigoqo kuyimithombo emikhulu kaphethiloli manje, kepha awufuni ukuthi ubadle usuku lonke nsuku zonke amasonto amathathu.
Futhi nochwepheshe abenzi kanjalo. Ngizokukhombisa ukuthi ungenza kanjani iresiphi eyisisekelo yekhekhe lelayisi engiyifunde kuNigel Mitchell e-EF Education First - iDrapac, kahle ukuthi le iresiphi engiyenza kakhulu futhi ngithanda kakhulu ukunambitheka nabangane bami bayayithanda nayo. Kwenziwa amakhekhe angama-20 kanti ikhekhe ngalinye lilinganiselwa kuma-23.24 amagremu ama-carbs futhi lingama-calories ayi-120, 130 alungile, ake siwalungise bese ngizokukhombisa inqubo yokugoqa le pro, nami ngizodinga i-GCN Capron ( Izinsimbi zokukhala) lezi izithako zeresiphi, irayisi kuqala, kuhle kufanele uvame ukusebenzisa irayisi yohlobo lwe-custard noma okusanhlamvu we-risotto, ungasebenzisa futhi irayisi le-sushi, ngithole irayisi le-arborio risotto, ama-Gramu ayi-500 alo.
Ushizi omncane othambile, u-250 amagremu, njengoba nje usekanini. Okunye ukukhishwa kwe-vanilla, isinamoni ethile, umhlabathi kuphela, isinamoni ejwayelekile. Ushukela othile.
Futhi umpe othile we-agave ukuwenza ube mnandi. Ungasebenzisa futhi uju uma ufuna, ngizogeza ilayisi kuqala bese ngisusa kuso izinsalela zesitashi, bese ufuna ukulifaka epanini elikhulu elinjengaleli, ngiqiniseke ukuthi unesivalo kwilayisi eligeziwe, mina ' Ngizoba nezipuni ezintathu ngisebenzisa ushukela omhlophe oyimpuphu kodwa ungasebenzisa noma yiluphi uhlobo lukashukela olifunayo, ngizobe sengifaka amathisipuni ambalwa esinamoni, angikali lokhu, ngiyamane nje ngikujikisa. Futhi ekugcineni isipuni se-vanilla.
Engxenyeni yelayisi lapha manje ngifaka amamililitha ayi-800 amanzi, manje ngizama ukunemba kahle. Uma ufaka amanzi amaningi, izokwenza ukuthi irayisi linamathele futhi libe budedengu futhi lingabambi ukuma kwalo kahle. Le nhlanganisela ibe isilethwa emathunjini bese yehliswa ibe isimeme ngemuva kokubila.
Kuzothatha cishe imizuzu eyi-10 ukupheka. Futhi kubalulekile ukubeka isivalo. Uma unompheki welayisi sebenzisa eyodwa yazo ngoba zinhle impela, kepha akudingekile neze, ungavele usebenzise ipani, isizathu esenza ukuthi ube nesivalo sisiza ukugcina umswakama ungaphakathi nokuthi njalo ivolumu yamanzi.
Uma ungenasivalo, amanzi ebengahwamuka futhi empeleni ubungeke ube nenani elifanele lamanzi elayisi, ungabona ukuthi ilayisi liphekwe nini ngoba empeleni wonke amanzi amunciwe nelayisi yiba muhle futhi uthambe, ngakho-ke, ngizokhipha lokhu ekushiseni manje, sengiqedile. Isinyathelo esilandelayo ukubeka ingxube yelayisi kuthileyi enkulu njengale. Kumxube welayisi ophekiwe manje sengeza ama-gramu angama-250 kashizi kakhilimu, ungawenza i-vegan ukuze ukwazi ukusebenzisa enye indlela ye-vegan uma ungathanda ukuhamba noshizi ovamile kakhilimu.
Sizosebenzisa futhi umpe we-agave njengoba kushiwo uju. Izipuni ezimbalwa zayo. Hlanganisa konke ndawonye.
Manje sengikuhlanganise konke. Ndawonye ngisebenzisa ispatula ukuyisakaza bese ngiyibeka nje kuthileyi isicaba ngangokunokwenzeka. Uma unenye ithileyi ongayibeka ngaphezulu, uyicabalele uyenze ibe yinhle futhi esebenziseka kahle, kepha anginayo okwamanje.
Osekusele ukuwumboza ngefilimu yokudla noma ukugoqwa kwepulasitiki uma uvela eMelika bese ukushiya esiqandisini ubusuku bonke ukuze kube kuhle. Ngenhlanhla, ngilungiselele okuningi ngaphambili lapha. Ima, ayikho, angiqondi.
Yile ndlela izethulo okufanele zisebenze ngayo. Linda, ake ngicacise lokho, uthi, empeleni kufanele ngenze okunye phambilini ukuze kube khona okwenziwe ngaphambili? Imisebenzi Kuzofanele silinde. (umculo ononya we-orchestra) (kukhala i-alamu yocingo) Lokho kusho ukuthi sebeqedile, ngakho-ke ngithole ingxube yelayisi efrijini, isilungile manje.
Futhi ngizoyisika ibe yizicucu ezilinganayo ezingama-20. Ngizoyinikeza amaphiko kuphela ngeso ngoba ngiyazihoxisa. Kepha uma ufuna ukucacisa impela, ungathola isilinganiso se-tape.
Ngizokukhombisa ukuthi uwagoqa kanjani amakhekhe elayisi ngamunye. Futhi ngalokhu udinga ifilimu eboshwe ngesikhumba. Manje usungakulanda ezitolo ezinkulu eziningi kepha ungasebenzisa ucwecwe olujwayelekile ngaphandle kwesikhumba ngakolunye uhlangothi, ngizamile, akusebenzi.
Ngakho-ke ngivamise ukusika isigaba esingamayintshi ayisithupha ubude bese ngisigoqa ngesigamu, ngisinqume sibe uhhafu kanti ngayinye yalezi zingcezu ilingana nosayizi wamakhekhe ami erayisi. (umculo we-elekthronikhi okhululekile) Thatha ikhekhe lakho lelayisi, ulibeke maphakathi nesikhumba bese uthatha isiphetho uligoqe njengesipho. Ngakho-ke yigoqe kanjena kuze kube sekupheleni, bese uthatha omunye umkhawulo uyisongele ngaphezulu.
Futhi-ke kufanele ube nokuningi ngokweqile bese ukugoqa ngale ndlela. Ukwakha leyo ndebe. Futhi leyo mlomo ilusizo impela ekuvuleni ikhekhe lapho lisephaketheni lakho.
Futhi ungabhala kuyo ukusho ukuthi, kulokhu, ikhekhe noma iphasela. Ngemuva kwalokho mane ucindezele imikhawulo njengesipho. Cindezela flat.
Futhi phinda futhi. Njengoba ngishilo, le iresiphi eyisisekelo, ochwepheshe abaningi bathanda usawoti - onenhliziyo enezinto ezifana nobhekeni noshizi kuwo. Ubenza babe mnandi, ungangeza amantongomane, ungangeza izithelo ezomisiwe njengezinsuku namagilebhisi omisiwe, noma yini entanta esikebheni sakho, uhlanye.
ukubuyekezwa kwamabhayisikili we-shinola
Manje ngithemba ukuthi uyijabulele le ndatshana futhi uma kunjalo, ngicela uyinike isithupha bese wabelana ngayo nabangani bakho, futhi uma ufuna ukuya esitolo se-GCN sinezikibha ezinhle ze-Alpe d'Huez eziphelele nathi i-Dutch Corner, kuhle. Ngisho nama-musette we-GCN. Futhi ukubona enye indatshana mayelana nokudla okunomsoco kumaGrand Tours nokuthi iPro Rider idlani, chofoza ku-musette yami.
I-i-musetteiqukethe namabhidoni amabili, elilodwa linamanzi (elimakwe ngo-'W ') nelinye elinesiphuzo samandla, kanye nekani lesiphuzo esihlohlisayo sokwenzela ushukela, ama-gel amabili wamandla nemigoqo emibili yamandla. UFeigl uphinde wathi abafuduki beqembu balungiselela ayisishiyagalolunye kuphelaimiculousuku ngalunye eyodwa yomgibeli ngamunye.18.07.2016
Yimaphi amabhayisikili osayizi asebenzisa izinzuzo?
Buhleukugibela ngokuvamileamabhayisikiliezineThubhu ephezulu yamasentimitha angama-20.5 kuye kumasentimitha angama-22 ubude. Abagibeli abafushane, kufaka phakathi izingane, ngokuvamile baneThubhu ephezulu yamasentimitha angu-18 kuye kwangama-20 ubude. Ishubhu Eliphezulu le-Ngoba-usayizi ibhayisikilingamasentimitha angu-20.5 kuye kumasentimitha angama-21 ubude.
Yini ikhasethi elingu-11 28?
Njengamanje, ukusethwa okujwayeleke kakhulu kumabhayisikili emigwaqo emisha ngamaketanga angama-50/34 aneishumi nanye-28 ikhasethi. Lokhu kusho ukuthi uchungechunge olukhulu noluncane lunamazinyo angama-50 nangu-34, ngokulandelana, kanye ne-amakhasethiingulube encane kakhulu inakhoishumi nanyeamazinyo kanye ne-cog yayo enkulu kakhulu ine28amazinyo.31. 2019.
Ingabe izinzuzo zisebenzisa izihlalo ezisikiwe?
Ngenkathi isikhungo esikhuluukuphumaisiza ukuqeda ingcindezi endaweni ye-perineum, esiza ukugeleza kwegazi. Kungenxa yalesi sizathu ukuthi Amandla Akhethekileisihlaloithandwa kakhulu phakathi kwabagibeli be-amateur kanye ne-Specialised sponsored World Tourbuhlengokufanayo.
Kungani izikhwama ze-pro ziphakeme kangaka?
Uhlaka oluncane oluneshubhu lekhanda elifushane, kanye nesiqu esihlala ngaphezulu phezulu kwethubhu yekhanda, izinzuzo ziyakwazi ukufeza ukwehla okukhulu kokuphakama kusuka ku-isihlalokubha yokuphatha. Izinzuzo zivame ukugibela ozimele abancane kunamajoe ajwayelekile.
Yini i-musette yaseFrance?
ibizo lesifazane. (= sac) isikhwama sasemini esikhishwe ngendwangu (sithwelwe ehlombe)
Luhlobo luni lwebhayisikili olusetshenziswa yiTour de France?
Amarimu, izihlalo zamabhayisikili, amahabhu, uyiqamba igama, konke kungenziwa ngekhabhoni. Lokhu kuholele ekutheni iTour de France nabanye abaphikisi bomjaho abakhulu bathathe la mabhayisikili agqamile futhi bengeze izinto ezidalwe emuva ezifana nama-alloy handlebars ukuze kuhlangatshezwane nomkhawulo wesisindo.
Ngobani amaqembu aseTour de France?
Amabhayisikili we-2020 Tour de France. Kunemikhiqizo yebhayisikili engu-19 exhasa amaqembu angama-22 we-2020 Tour de France. ICanyon, iWillier, ne-Specialised banamaqembu amabili lilinye, kanti eminye imikhiqizo ine
Yimiphi imithetho yeTour de France?
Ukuze kugwenywe noma iyiphi ingozi yokushayisana kwezintshisekelo, amaqembu kanye nelungu ngalinye lawo (abagibeli, abasebenzi abaphethe, abaqeqeshi, odokotela, njll.) Baphoqelekile ukuthi bangazibandakanyi mathupha emisebenzini yokubheja ezemidlalo ephathelene neTour de France, noma ngqo noma ngokusebenzisa umxhumanisi - Isigaba 30